Shabakadda Amiirnuur – Page 3
Qarax iyo weeraro ka dhan ah Kenyaatiga iyo askarta Jubba land.
Gaari Xamuul ah ayaa Ciidamada Kenya maanta looga gubay Deegaan ka tirsan Gobalka Xeebta ah gaar ahaan inta u dhaxeysa deegaanada Milimaani iyo maangaay oo Laamu hoos taga. Gaarigaan ayaa la sheegay in uu ku rarnaa qalab kenya ay u adeegsaneysay dhismaha derbi ay ka dhiseyso Xad Beenaadka labada Dal […]
Kenya oo Gaari iyo askartii saarnayd laga qarxiyay.
Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa Shalay qarax la beegsaday Ciidamo ka tirsan kuwa Dowladda iyo Gaari kuwa gaashaaman oo ay saarnaayeen. qaraxa oo Gaariga lagu gubay ayaa ka dhacay deegaan ku yaala Soohdin beenaadka oo Hosingow ka xiga dhanka Dhulka Sooamaliyeed ee Kenya gumeysato. waxaa la aamisan yahay in askartii […]
Dhegeyso:- Sheekh Abuu muscab oo ka hadlay dagaalki Bariire iyo dagaalo kale.
Xarakada Shababaul Mujaahdiin ayaa Faahi Faahin dheeri ah ka bixisay Dagaalo Saaka ay ku qaaday Ciidamada Dowladda Federaalka ah ee ku sugan Shabeelaha hoose gaar ahaan Awdheegle iyo Bariire. Afhayeenka Dhanka Ciidamada ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin Sheekh Cabdi Caziiz Abuu Muscab oo Warbaahinta la hadlay ayaa sheegaya in ay Bariire […]
Faah Faahin: Al Shabaab oo 47 Askari ku dilay Xerada Bariire gaadiid dagaalna qabsaday.
Dagaalyahanada Al-Shabaab ayaa aroornimadii saaka weerar xoogan ku qaaday saldhigga ciidamada DF ee deegaanka Bariire ee Sh/hoose, iyadoo halkaas xasuuq ba’an ugu geystay maleeshiyaatka Soomaalida, lana wareegay inta badan gaadiidkii iyo zaanadihii hubka ee yaalay xeradaasi. Dagaalkan oo ahaa mid aad u xoogan ayaa lagu daah-furay qarax loo adeegsaday gaari […]
Alshabaab oo weerar ay askar badan ku xasuuqday ka fulisay Shabeelaha hoose.
Ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan Xarakada Shabababul Mujaahidiin ayaa saaka weerar ku qaaday fariisimo Ciidamada Dowladda Federaalka ahu ku leeyihiin MagaalooyinkA Awdheegle iyo Bariire oo ka tirsan Gobalka Shabeelaha hoose. Ciidamada ayaa la sheegay in ay cagta mariyeen qaarka mid ah dhufeysyada Ciidamada iyagoo halkaa ku laayay askar […]
Dhegeyso:- Wilaayada Banaadir oo Xukun Xaddu Sino ah fulisay iyo Waaliga Bnaadir oo Goob joog ahaa
Maxkamdda Ilsaamiga ah ee Wilaayada Banaadir ayaa Meel Fagaar ah ku fulisay Xukun Xaddu Sino ah iaydoo ay ak soo qayb galeen xubno ka tirsan Hogaanak Xarakada Shabaabul Mujaahidiin iyo dad kale intaba. inkastoo Banaadir ama Muqdisho ay haystaan Ciidamada Shisheeye iyo Dowladda Federaalka ah hadana waxaa magaalda Kaabiga ku […]
Al Shabaab oo shacabka Soomaaliyeed uga digtay Talaalka AstraZeneca [Bayaan].
Bayaan kasoo baxay Maktabka siyaasadda iyo wilaayaatka Xarakada Al Shabaab ayaa looga hadlay talaalka halista ah ee lagu magacaabo AstraZeneca kaasi oo dhowaan ay dalka soo geliyeen hay’ado reergalbeed ah Al Shabaab ayaa shacabka Soomaaliyeed uga digtay in ay qaataan talaalka AstraZeneca. Halkan ka akhriso bayaanka oo ku qoran Afsoomaali […]
Alshabaab oo Shan Gobalka howl galo ka fulisay.
Ciidamada Xarakada Shababul Mujaahidiin Xalay iyo Saaka waxay fuliyeeen howl galo kala duwan. Saaka Duleedka kismaayo waxay ku gubeen Gaari Caafimaad oo nooca Amalaasta ah oo ay isticmaalayeen Ciidamada Maamulka Jubba land Gaariga ayaa la gubay kadib markii Ciidaamda Jubba land qaarkood gaar ahaan kuwa fariisin ku leh Baar sanguuni […]
War rasmi ah oo kasoo baxay garabka warbaahineed ee Al Shabaab ayaa lagu sheegay in caawa labaahin doono kalimad uu jeedinayo Hoggaamiye Sheekh Abuu Cubeyda Mu’assassada Warbaahinta ee Al-Kataib ayaa caawa baahisay ‘Farriin ku Socota Shacabka Reer Jabuuti’ taasoo uu jeedinayo Amiirka Xarakada Al-Shabaab, Sheekh Abu Cubeydah Axmad Cumar. […]
khasarooyin ka dhashay dagaalo Xalay ka dhacay gudaha Dalka
ugu yaraan hal askeri oo ayaa ka dhintay laba kalena waa ka dhaawacmeen Ciidamada Burundi ee ku sugan Deegaanka Miir takhwo ee Gobalka Shabeelaha dhexe deegaankaasoo horay loo oran jiray Miir tuugo . Khasaarahaan aya yimid kadib dagaal Xalay ay ku qaaday Xarakada Shabaabul Mujaahidiinta Alshabaab. dagaalka ayaa mudda halkaa […]